Kutheni kufuneka ukhethe isikhumba ngaphezulu kwendwangu?
EyeNkanga 16, 2018 by Royal52, Iimbono zizonke:
Xa kuziwa kumhlobiso wasekhaya kuhlala kukho le ngxaki yokuba nezinto ezininzi onokukhetha kuzo kodwa usilela uluvo malunga nokuba yeyiphi. Uya kusala unamanqaku emibuzo kuphela. Ngenxa yalonto unokugqibela ukhetha into ongayifuni.
Xa uthenga izinto zokuhombisa umhlobiso omninzi kufuneka ubekwe kuwo. Kungenxa yokuba uza kutyala imali eninzi xa kuziwa ekuthengeni izinto ezifana nefenitshala. Eyona ndlela ifanelekileyo yokuthatha isigqibo kwisigqibo kukuthatha isigqibo sokuba ufuna ntoni ngokwenene - intuthuzelo kunye nokuqina?
Royal52 Novemba 16, 2018
Olu ngeno yafakwa kwi Ukuphucula iKhaya noqhotyosho Ukuhonjiswa kwegumbi, Igumbi lokulala kwigumbi lokulala, Ukuhlobisa, abaqeqeshi bokuhombisa, Imibono yokuhombisa, Umhlobiso, umgubo, ikhaya, isikhumba, Ukuhonjiswa kwesikhumba, umhlobiso othembekileyo. Bookmark le Permalink.
Septemba 13, 2017 7 Tips to Make Your New House Feel Like Home After buying a new house, it can take some time to adjust to your new space. Here are seven tips to help you feel more at home instead of getting overwhelmed by all of the boxes. 1. Unpack Unpacking all of your boxes is a daunting task; however, it is necessary to make your new house feel like home. Unpacking and finding a place for everything will help bring back familiar sights, while helping you get settled in. 2. Get to Know Your Neighborhood It can be difficult to […] exhonyiweyo Ukuphucula iKhaya, Ukuqhubeka
Aprili 1, 2017 Iingcebiso ezi-6 ezilula zoYilo oluDibeneyo lweKhaya Njengoko ilizwe lanamhlanje likhawuleza kwaye linxinzelelo, wonke umntu ufuna indawo entle yokubuya emva kosuku olude ukuze azive ekhululekile kwaye ekhuselekile. Akumangalisi ukuba abantu abasoloko bekulangazelela ukugoduka kuthathwa njengethamsanqa. Nangona ukubaluleka kwendawo entle endlini kubonakala, kuphela iingcinga ezimbalwa zokuphinda kulungiswe kwakhona kunye nokulungiswa okubulala umnqweno wokutshintsha into. Nazi ezinye iindlela ezilula nezifikelelekayo zokwenza ukuba ikhaya lakho lizive lipholile kwiintsuku ezimbalwa. Umbala odongeni […] exhonyiweyo Ukuphucula iKhaya
January 7, 2017 I-5 yeeNdawo eziPhilayo zeGumbi lokuHombisa ukuba uya kuyithanda ngokupheleleyo! Igumbi lokuhlala yindawo ephambili ekhaya. Ayingawo onke amagumbi asebenzela nje abo banendawo okanye imigangatho egada abantwana, igumbi losapho lelomntu wonke. Inika amaqabane, usapho kunye neendwendwe indawo yokuhlala efanelekileyo. Zininzi iindlela zokwenza indawo yokuhlala kwigumbi lokuhlala eliPhakathi: Igumbi lentsapho elinamaxesha elinokusebenza linokusebenza uluhlu olubanzi, ukusuka kwindawo yokuhlala esisemthethweni ukuya kwindawo yokuhlala lula eneendawo zokuphumla ezimnandi kunye […] exhonyiweyo Ukuphucula iKhaya
Oktobha 21, 2016 Iindlela ezili-10 eziQhelekileyo zeSitayile seGumbi lokuhlala elincinci Akukho mntu uthanda ukutyibilikiswa kwigumbi labo lokuhlala. Sisithuba esifanele ukuba yi-hangout yakho oyithandayo kunye nendawo apho bahlanganela khona usapho kunye nabahlobo. Akunakuba yindawo emnandi ukuba uziva unxinekile kwaye unqongophele, nangona kunjalo. Musa ukuvumela i-footage square ikuthintele ekubeni ne-comfy kunye neendawo zokuhlala ezimileyo. Kukho inani lamaqhinga anobuqili onokuwasebenzisa ukuze abonakale emakhulu. Siza kukuhambisa ezimbalwa nje zazo, kwaye ngethemba lokuba ziya kuvuselela umbono wakho kwikamva elizayo […] exhonyiweyo Ukuphucula iKhaya
Juni 29, 2017 UkuNwaba kunye nokuSebenza kwabaNtu kwiNdawo yokuHlala kwiMibono / kwiNgcebiso ezi-5 zokukuNceda ukuHombisa igumbi lokulala likaGqirha wakho Igumbi lokulala labantwana lelona gumbi lininzi elisebenzayo endlwini yakho. Yindawo apho abantwana baya kudlala khona, bafundisise, balale, bameme abahlobo kunye nokuba ixesha liphumile. Bachitha ixesha elininzi kumagumbi abo okulala. Xa uphinde wamkeleke kwigumbi lomntwana, qiniseka ukuba udala umoya ococekileyo kunye nobumnandi. Gcina imali kwizinto ezihonjisiweyo ezisebenza kwaye zikhuselekile. Izinto ezisebenzayo khuthaza umntwana wakho ukuba afunde kwaye akhulise iingcinga zabo. Nazi izimvo ezimbalwa ngendlela […] exhonyiweyo Ukuphucula iKhaya